Wiil Soomaali ah oo loo haysto fal Afduub Nairobi | KEYDMEDIA ONLINE
Wiil Soomaali ah oo loo haysto fal Afduub Nairobi
Ciidamada Booliska waddanka Kenya ayaa xabsiga utaxaabay will dhallinyaro ah islamarkaana ah Soomaali kaasoo loo haysto fal af-duub ah oo uu kula kacay gabar Soomaaliyeed
NAIROBI, Kenya - Wiil Soomaali ah oo loo haysto fal Af-duub ah ayey soo xireen ciidamada ammaanka waddanka Kenya. Xafsa Maxamad Luqmaan oo ahayd gabar ganacsato ah isla markaana toddobaadkan dhexdiisa la waayay, sawirkeedana baraha bulshada la iskula wadaagayay ayaa la helay iyadoo wajigeeda ay ka muuqdaan dhaawacyo.
Waaxda dembi barista dowladda Kenya ayaa sheegtay in Xafsa oo ah 23 sank jir laga helay guri ku yaalla halka loo yaqaano Matopeni ee xaafadda Kayole ee Nairobi, sidoo kalena afduubkaas loo haayo hal eedeysane oo ay ciidamadu soo bandhigeen masawirkiisa.
Ninkaan ayaa la tilmaamay inuu ka dambeeyo afduubka gabadhan oo lagu magacaabo Xafsa, waxaa la sheegay inuu ku hayay caag madaxa laga gooyay si lacag madax furasho ah uu uga qaato sida ay shegeen laamaha Amaana Kenya.
Sidoo kale dowlada Kenya ayaa waxay ku raad jogtaa shabakado la sheegay in dadka ay afduubtaan, waxaana jira gabdho kale oo afduub ahaan loo heysto oo maqan, kuwaas oo ehelladooda iyo laamaha amnigu ay baadi goobayaan. Sidoo kale waxaa baraha ay bulshadu ku xiriirto la isku dhaafsanayay muuqaal laga duubay niman udhashay waddanka Kenya oo tiro ahaan lagu qiyaasay 4 ruux kuwaasoo si qasab ah gaari ku saartay wiil dhallinyaro ah.